सस्तो अनि राम्रो घर बनाउने उपाय खोज्दै हुनुहुन्छ ? आयो है यस्तो विकल्प पनि – samyantra.com
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र २६, २०७४ समय: ०:१३:०५
भूकम्प प्रतिरोधी र उच्च प्रविधियुक्त घर सस्तोमा बनाउने विकल्प खोजिरहनु भएको छ ? त्यसो हो भने पन्चकन्या समुहले बनाइदिने ‘स्टक्चर स्टिल’ तपाइको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।
पञ्चकन्या ‘स्टक्चर स्टिल’को नामबाट पञ्चकन्या समुहले नेपालमा नै पहिलो पटक ग्याल्भनाइज स्टिलको उत्पादन गरेर घर निर्माणमा नयाँ प्रविधि भित्र्याएको छ । संमृद्ध र भूकम्पीय जोखिम भएका देशहरुले यस्ता ग्याल्भनाइज स्टिलको प्रयोग गरेर घरहरु निर्माण गर्ने गरेका छन् । नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पपछि धेरै घरहरु भत्किए । पुननिर्माणको सुरुवातसँगै अब बनाइने घरहरुको मोडल, प्रबिधि र जोखिम रहित हुनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको पञ्चकन्या समुहका प्रबन्ध निर्देशक प्रदिपकुमार श्रेष्ठ बताउछन् ।
‘हामीले भूकम्प जानु अगाडीदेखि फ्याक्ट्री निर्माणको तयारी गरिरहेका थियौं, भूकम्पपछि निकै छिटो गरेर उत्पादन गर्यौं,’ श्रेष्ठले भने । ग्याल्भनाइज स्टिल हलुका हुनेहुँदा यसलाई कुनैपनि ठाँउमा लान निकै सहज हुन्छ । इन्जिनियरले घरको नक्सा बनाउँदा नै कति क्षेत्रफलमा, कति भार थेग्न सक्छ भन्ने जस्ता कुराको अध्ययन गरेर बनाउछन् । निर्माणकर्ताको आवश्यकता अनुरुप यसको प्रयोग हुने हुँदा यसबाट बनेका घरहरु निकै आर्कषक र बलिया हुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
यदि कम्पनीको अनुसार निर्माण गर्ने हो भने २२०० देखि २४०० प्रति बर्गफिटमा तर्पाइको घर निर्माण हुने छ । यो खर्च अन्य परम्परागत रुपमा बनाइने घरको भन्दा कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत सस्तो पर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यस्ता स्टक्चरको आयु ५० बर्षसम्म हुने दाबी कम्पनीको छ ।